चाणक्य नीति : जीवनमा यो चिज प्राप्त गर्न असम्भव छ, लाखौं कोसिस गरे पनि पाउनेछ हार ! -चाणक्य नीति : जीवनमा यो चिज प्राप्त गर्न असम्भव छ, लाखौं कोसिस गरे पनि पाउनेछ हार ! -
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १७:१६ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । आचार्य चाणक्यलाई एक महान शिक्षाविद् र अर्थशास्त्री भनेर चिन्दछन् । यद्यपि आचार्य चाणक्यको विचार र नीतिहरू मानिसहरूलाई कठिन हुन सक्छ, तर यो जीवनको कठोर सत्य हो। चाणक्यले नीति शास्त्रमा जीवनसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। यसको साथमा, हामीले यो पनि भन्यौं कि यस्तो के चीज छ जुन लाखौं प्रयास गरे पनि पाउन सकिदैन।
चाणक्य एक श्लोकमा भन्छन् कि बुद्धिले पैसा कमाउन सकिन्छ तर पैसाले बुद्धिले कमाउन सकिन्न । चाणक्यको अर्थ हो कि यदि व्यक्ति बौद्धिक छ भने उसले पैसा कमाउन सक्छ। तर यदि एक व्यक्तिको मात्र पैसा छ भने उसले पैसाले बुद्धिमत्ता किन्न सक्दैन।
चाणक्यले श्लोकाको अर्थ विस्तारपूर्वक वर्णन गरे कि यदि कसैसँग पैसा छ भने पैसाको सही प्रयोग र पैसा बढाउनु उसको बुद्धिमता र विवेकमा निर्भर गर्दछ। चाणक्य भन्छन् कि एक व्यक्ति यी सबै चीजहरू मात्र विचार गर्न सक्दछ जब ऊसँग धनी बुद्धि हुन्छ । यसको विपरीत, यदि एक व्यक्ति बुद्धिमत्तामा धनी छैन भने, उसले कसरी पैसा राख्ने भनेर सही निर्णय लिन सक्ने छैन कि यसमा लगानी गर्दा पैसा डुब्ने छैन र बचत हुनेछ भनेर । आचार्य चाणक्य भन्छन् कि बुद्धिमत्ताबाट धन कमाउन सकिन्छ तर पैसाले बुद्धिमत्ता किन्न असम्भव छ।
बुद्धि र विवेक पैसा भन्दा महत्वपूर्ण
आचार्य चाणक्य नीति शास्त्रमा भन्छन् कि यदि कसैसँग पैसा छैन भने पनि त्यो व्यक्ति जीवनमा सफल हुन सक्छ। तर जो मानिस बुद्धि मा धनी छैन, आफ्नो हात मा सफल महसुस गर्दैन। चाणक्य भन्छन् कि यो बौद्धिकता र विवेकको कारणले गर्दा समाजमा सम्मान प्राप्त हुन्छ।